Salai Kyaw Thet Aung Nih Laithuam He Puai A Kal Nak – Myanmar Chin
Salai Kyaw Thet Aung Nih Laithuam He Puai A Kal Nak
December 4, 2019 Myanmar Chin Myanmar 0
Salai Kyaw Thet Aung Nih Lai Thuam He Puai A Kal Nak
“တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” timi Video ai thla tu pawl nih Red Carpet Show puai an tuah i Cu puai ahcun Kawlpa Salai Kyaw Thet Aung akal ve i Lai thuam he akal.
A tu Video an i thlak mi hi Chi ram ah an i thlak i , Korea Minta ,Ryu Sang Wook le သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ မေသန်းနု၊ le Salai Kyaw Thet Aung an i tel. Cu Shaw puai cu December3ah Yangon khuacung Juction City ah an tuah iatu lio Myanmar Idol ai zuam cuahmah mi pawl zong an sawm hna.
Amak ngaingai mi cu Myanmar Idol ah nawl ngeitu Mouk Laung Saing cu Hakha thuam hearak chuak ve bak ko. Ai tlak lawlaw khiasi.
“တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Red Carpet Show ပြသပွဲ ပြုလုပ်
ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၉။
ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင်တို့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Red Carpet Show အထူး ပြသပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Juction City မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ကိုရီယားမင်းသား Ryu Sang Wook နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ မေသန်းနု၊ ကျော်ထက်အောင်နဲ့ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” Red Carpet Show ပြသပွဲကိုတော့ အနုပညာရှင်များစွာနဲ့ Myanmar Idol အဖွဲ့သားတွေပါ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း – ချစ်ပိုး/ဧရာဝတီ
ဓာတ်ပုံ – ချစ်ပိုး၊ နေပိုင်/ဧရာဝတီ
Halkha Viewpoint area ah lakphak Dawr/inn Sak Lo Dingin Vuanci Le Upa Dang Sinah Ka Nawl Hna